Tire sy toro-hevitra amin'ny rivotra
Cars & Motorcycles Kodiarana sy kodiarana
Ny tsindry avy amin'ny rivotra dia ny rotsak'orana amin'ny tsimokaretina rehetra, ary koa ny maha-zava-tokana ny momba ny sidina iray izay afaka miova tokoa ilay mpamily! Misy ihany anefa ny hadisoana vitsivitsy ary misy diso ny fampahalalam-baovao misimisy momba ny faneriterena amin'ny tifitra, ary ireo mpamily lavitra loatra, (ny tenako ihany) dia mandoa be loatra ny faneriterena ataony araka ny tokony ho izy. Ireto misy santionany mivantana.
Fantaro ny tsindry azonao
Ny ankamaroan'ny kodiarana dia hanana marika ho an'ny "Max.
Cold Press. "Nibitsibitsika tamin'ny sisiny. Aza mampiasa io tsindry ao anatin'ny kodianao io! Ny tsindry avy amin'ny rivotra mety dia eo amin'ny takelaka vita amin'ny rivotra miditra eo anoloan'ny varavaran'ny fiara. Ity ny tsindrin-tsakafon'ny mpanamboatra ny fiara, mifototra amin'ny lanjan'ny fiara sy ny habe.
Tsara ny lokony
Betsaka ny mpamily miara-milina amin'ny tsindry amin'ny kodiarany, manitsy ny fiarandalamby na mora kokoa. Tsy manao an'izany aho, fa raha manao izany ianao, dia manoro hevitra aho fa tsy ao anatin'ny fetran'ny fetra fotsiny. Tsy manitsy loatra mihoatra noho ny vola vitsivitsy eo amin'ny andaniny roa amin'ny famolavolana ny orinasa aho. Ny ankabeazan'ny fiara ankehitriny dia manana fantsona fampitandremana fanenan-tseranana izay manazava raha toa ka misy 25% isaky ny tsindry ahafahana mivezivezy - raha mahita izany ianao, dia mihetsiketsika be loatra.
Ny sasany dia milaza fa ny fiatrehana ireo kodiarana dia afaka manampy amin'ny fiarovana ireo kodiarana amin'ny fiantraikany. Tsy mety izany, raha ny marina, be loatra ny tsindry mety mety ho ratsy na ratsy kokoa noho ny loatra. Ny kodiarana an-katerena dia hampita hery bebe kokoa avy amin'ny fiantraikan'ny kodiarana toy ny kodiarana izay afaka mamakivaky kely.
Raha manao fehezan-teny ianao, dia diniho tsara ny kodiaranao amin'ny marika famantarana ny tsy filaminana. Ny "fametahana", na ny fiakoana be loatra ao afovoan-tsatoka, dia marika mahavaky loatra. Ny fiakanjoana be loatra amin'ny sorok'ilay fantsona dia marika kely amin'ny tsindry loatra.
Ny fiasan'ny rivotra dia miovaova amin'ny hafanana
Mba hahitana ny fanandramana tsy tapaka dia jereo foana ny faneriterena alohan'ny fiara rehefa mangatsiaka ny kodiarana.
Raha toa ka tokony hampiana rivotra amin'ny kodiarana mafana ianao dia avelao farafahakeliny na roa latsaky ny mahazatra, arakaraka ny habetsaky ny rivotra manaitra anao. Raha sendra kilaometatra ny manodidina, ataovy azo antoka ny fifehezana amin'ny tsiranoka maraina - ny toetr'andro dia mety hidina manodidina ny 1 psi ho an'ny elanelam-potoan'ny 10 degre . Miaraka amin'ny fingotra mangatsiaka mangatsiaka, io fahavoazana amin'ny tsindry io indraindray dia mety miteraka fibobohan-tohotra tsy mitombina.
Ny fanerena ambany dia hanimba ny kodiaranao
Ny fihazakazaka amin'ny tsindry ambany amin'ny kodiarana mandritra ny vanim-potoana maharitra dia mety hanimba tsikelikely ny sisin'ny kodiarana rehefa manomboka miakatra izy. Vetivety kely fotsiny dia manomboka manimba ny fingotra, fa amin'ny lafiny iray, ny sisina dia mihodina fa mihodina ny sisiny anatiny, ary izany dia hanomboka hanala rubber avy ao anaty kodiarana, mamela ny tady mivoaka, ary tanana maro "Vovoka fingotra" ao anatin'ny kodiarana. Amin'io fotoana io, rava ny rindrina. Raha ny modelinao na modely tamin'ny taona 2007, dia hanana "faneriterena baomba ambany" eo amin'ny tontonana izy io. Fantaro ny famantarana iraisampirenena ho an'ny faneriterena tsindry ambany, satria mety hijery be dia be izy raha tsy mbola hitanao izany aloha. Ny teboka rehetra amin'ny TPMS dia ny mampitandrina anao alohan'ny hitrangan'ny loza.
Ny fanerena ny faneriterena amin'ny rivotra dia iray amin'ireo fiarovana miverimberina indrindra amin'ny fiaranao.
Ny fikojakojana ny rivotra mety hanomezana lanja ny gazy tsara kokoa, misoroka ny tsy filaminana sy manitatra ny fiainan'ny kodiaranao an'arivony kilaometatra. Raha tsy ao anatin'ny fikojakojana ny fikojakojana - ary ho an'ny mpamily an-tapitrisany, tsy izany - tokony tena miezaka ny manao azy farafaharatsiny isam-bolana ianao.
Tire Buy Dos and Don'ts
Inona no tokony ho fantatra momba ireo kodiarana amin'ny ririnina
Toeram-piofanana mipoapoaka: TPMS sy korrosion
Nanazava ny mpitsoa-ponenana tao Tire
Fitaovana fiarovana any Tyro
Ahoana no fiasan'ny kodiarana marefo?
Kodiarana maranitra: manosotra na tsy te-jiro?
Datin'ny Franchise amin'ny fidirana ao amin'ny NFL
Miara-miasa amin'ny Hetsika Tranainy Indeks
Nahoana ianao no te hanatona anao ny moka?
Inona ny Orbola Angel?
Mahatsiaro ny fambolena mimosa eny an-tokotaninao
Andro iraisam-pirenena manao sikidy ve?
Fantaro ny Arkanjely Azrael, Anjelin'ny Fanovàna sy ny Fahafatesana
Ny biography of Mary Sibley
Yaxchilán - Tanànan'ny tanànan'i Maya ao Mexico
Hunter College GPA, SAT sy ACT Data
2009 US Open: Famerenana ny teny filamatra ao amin'ny Bethpage Black
Ida Tarbell: Mpanao gazety mikiaka, Kritikan'ny Herinaratra
Misaora amin'ny fijaliana
Ahoana ny fomba fanaovana haingana ny endriky ny volo
Hajao ny olo-malaza miaraka amin'ny Andro Vetson'ny Happy Veterans
Inona no azonao atao momba ny fampiasana zaza tsy ampy taona sy fanandevozana amin'ny orinasan-tsakafo
Fandaharan'asa fisorohana herisetra ara-pihetseham-batana ara-nofo voafetra voafetra amin'ny fisalasalana
Ireo zandary maro dia maro any Etazonia
Ny adiresy momba ny Conservatoire New England
Ny Mystique Feminine: Ny Bokin'i Betty Friedan "Nanomboka Izany Rehetra"
Ny tsy fitovian'ny filazantsaran'i Jesoa ny fanomboana an'i Jesoa
Inona ilay Persona Faharoa?
Inona no atao hoe Mustang Twister manokana?